Fitiavana ho an'ny trano fambolena sy mpanofana lamba - Fitaovana iraisam-pirenena - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fitiavana ho an'ny trano fambolena > Fitiavana ho an'ny trano fambolena
Ny WENAP Fasteners dia manana tsindrimandry sy rantsana feno ho an'ny efitrano fandriana, lakozia, trano fisakafoanana ary efitra fametrahana efitra fandraisam-bahiny. Manana ny sarin'ny fiaramanidina isika, ny rindrina amin'ny rindrina, ny fantsika ary ny fitaovana hafa ilaina amin'ny indostria. Manaparitaka ny vokatra azo avy amin'ny fitaovana natao manokana ho an'ny indostrian'ny Fine Furniture. Ny WENAP Fasteners dia manana ny pensilihan-tàhaka ho an'ny tarehimarika ho an'ny tarehinao izay manome filàna ilaina ihany koa.
Product Introduction of the Fitiavana ho an'ny trano fambolena
Ny bobongolo na ny fanamafisam-peo na fanamafisana dia natao tamin'ny vy sy kilaometram-barotra. Izy ireo dia natao manokana mba hampiasaina amin'ny fitaovana vita amin'ny hazo. Ireo karazana hazo ireo dia ampahany kely sy plywood izay ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanaka. Ny bobin-davenona dia hatsaran-tarehy tonga lafatra, izay mahatonga ny fiaraha-miombon'antoka tsy hay hadinoina amin'ny tapa-kazo sy plywood. Ny visy dia afaka esorina sy manorina indray raha ilaina, izay mahatonga ny fanetsehana ny fanaka ambioka mora sy mora. Manana soritra lava eo ambany loha izy ireo. Ny soritra mitongilana dia manome hery mihazona fanampiny ary manamaivana ny mety hisian'ny fiatrehana fiara. Amin'ny fampiasana ny bobaka, ny lavaka voavolavola amin'ny alalan'ny fitaovana roa dia ilaina.
Product Parameter of the Fitiavana ho an'ny trano fambolena
5.0mm, 6.3mm, 7.0mm.
40mm - 70mm.
Teboka mivelatra, loha barotra, misy lavaka lalina na lavaka kely.
Pozi drive, hex socket drive.
Karbonina vy sy vy tsy misy tanany.
Fotsy mainty vita amin'ny fotsy / manga / mavo, akalalin'ny mainty, tongolo gasy, haingam-paty mafana, varahina matevina, fotsy hoditra mainty.
5-20 andro, miankina amin'ny habetsahana
Â · Manangona ao anaty carton avy eo amin'ny pallets.
Â · Manaova kitapo kely na boaty kely avy eo amin'ny carton avy eo amin'ny pallets na mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Mankasitraka ny endriky ny mpanjifa ihany koa izahay ary manamboatra ny fomba amam-panaovana ny karazan-tsakafo rehetra.
Product Feature and Application of the Fitiavana ho an'ny trano fambolena
Â · Ny sorok'aina lehibe natao hatreny ambany loha dia mampitombo ny hery mihazona ao amin'ny solaitrabe ary mampihena ny fahavoazana ny birao.
Â · Ireo teboka manify tsy mahazatra dia manamaivana ny fahavoazana ao amin'ny birao.
Â · Miaraka amin'ny karazana fiarovan-tena.
Azo alamina sy reraka imbetsaka izy io raha tsy mihena ny fitazonana fahefana, ka mora ny mihetsika.
Â · Ny ampahany kely tsy misy farany amin'ny farany dia mahatonga azy ho mora ny mametraka ny lavaka mandritra ny fivoriambe.
Ny bozaka fanaka dia fifandraisana tsara amin'ny fizarana pika sy plywood. Manome hery tsara izy ireo amin'ireo fitaovana malefaka ireo noho ny endrika manokana.
Â · Ideal amin'ny fampiharana amin'ny indostrian'ny fanaka.
Azo ampiasaina amin'ny kabinetra sy ny programa fananganana boaty hafa ihany koa.
Product Details of the Fitiavana ho an'ny trano fambolena
Fandefasana:Amin'ny ranomasina, amin'ny rivotra, amin'ny làlambe na amin'ny tolotrasa maneho hevitra
Hot Tags: Fitiavana ho an'ny trano fambolena any Shrews, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, Made in China, Wholesale, Buy, Customized, An-tsompitra, Bulk, Vidiny, Vidy, Teny fohy, High Quality
Fehezina azo amidy ho an'ny fanaka
Angle Bracket ho an'ny fanaka
Fandefasana Cam Cam Lock Lockers
Fitiavana ho an'ny trano fialofana any Bolts
Fitiavana ho an'ny trano fialan-tsasatra
Nail amin'ny foza vita amin'ny barazy